[နယူးသည် SAP ERP]
နယူးသည် SAP ERP
SAP ERP အသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများ, လမ်းညွှန်များနှင့်ရှင်းလင်းချက်များ
Plan ကို-Buy-Pay ကိုမ Ariba ဖြစ်စဉ်ကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်,
SAP GUI ကို Graphical User Interface
SAP အတွက် password ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
SAP password ကို reset နှင့်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
Excel ကိုစာရင်းဇယားမှတင်ပို့ဖို့ဘယ်လို SAP?
SAP GUI ကို installation ကို 740 ခြေလှမ်း
SAP GUI ကိုတပ်ဆင်ခြင်း steps 750
SAP GUI ကိုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအသိပေးချက်များဖယ်ရှားပါ
Excel ကိုမှ SAP အစီရင်ခံစာတင်ပို့ဖို့ကိုဘယ်လို
ကျသည် အတွက် SAP ပြသ ကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအမည်များ
SAP သံကိုသက်ရောက်မှုကို turn off
SAP FICO ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ထိန်းချုပ်မှု
SAP FI OB52 ငွေပေးငွေယူနေတဲ့ပို့စ်ကာလပိတ်ဖို့
SAP FI အတွက်ကုမ္ပဏီကုဒ် Create
အမှားလယ်ကွင်းတန်ဖိုးကိုရက်စွဲ, G / L ကိုအကောင့်အတွက်လိုအပ်သောအကွက်တစ်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်ဖြေရှင်း
SAP S / 4HANA အမြတ်စင်တာစားပွဲပေါ်မှာ CEPC
SAP FICO အတွက်ကုမ္ပဏီမှကုမ္ပဏီကုဒ် assign
SAP ကို ​​Message C + 302 - စက်ရုံအတွက်တက်ကြွစွာမဟုတ်ပစ္စည်းလယ်ဂျာ
အမြတ်အစွန်းစင်တာရက်စွဲသည် SAP ဘို့မတည်ရှိပါဘူး
SAP စာရင်းကိုင် data တွေကိုသေးထိန်းသိမ်းထားမဟုတ်
ကုမ္ပဏီကုဒ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုအရေအတွက်က F5155 အတွက်ဖောက်သည်များရောင်းချသူအဘို့အဘယ်သူမျှမကငွေပမာဏကိုခွင့်ပြုချက်
အမှားကုမ္ပဏီကုဒ်ဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လို SAP မတည်ရှိပါဘူးသို့မဟုတ်အပြည့်အဝထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ
SAP KI248 အကောင့်ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် CO အရာဝတ္ထုတစ်ခုတာဝနျကိုလိုအပ်တယ်
SAP MM ပစ္စည်းမာစတာ
MM အင်တာဗျူးမေးခွန်းများကို SAP - နဲ့သူတို့ရဲ့အဖြေတွေကို
SAP အတွက်ပစ္စည်းခွဲခြား Find
တစ်ဦးပစ္စည်း / ဆောင်းပါးအဘို့အပွင့်လင်းသောအမြင်များသည် SAP ထွက်ရှာတွေ့
အမှားဇယား TCURM နှင့် T001W ကိုက်ညီမှုဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လို SAP
SAP အတွက် BOM ပြောင်းပေးဖို့ကိုဘယ်လို
SAP ထုတ်ယူကြိုတင်ခန့်မှန်း parameters တွေကို (MPOP ဖွဲ့စည်းပုံမှာ)
SAP LSMW အမွေအနှစ် System ကိုရွှေ့ပြောင်းလုပျခှငျ
SAP ပို့ကုန် LSMW သုတ် input ကို session တစ်ခုရလဒ်များကို
SAP LSMW သုတ်အချိန်ဇယားဆွဲ
SAP IDoc အတွင်းသို့ထုတ်ယူခြင်းများအတွက်အဖော် System ကိုသတ်မှတ်
စနစ်သစ် entry ကို SAP GUI ကို Create
SAP S / 4HANA အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖန်တီးလုပ်နည်း
SAP ဗားရှင်း0ဘဏ္ဍာရေးနှစ်များအတွက်သတ်မှတ်ထားသောမဟုတ်ပါ
မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းများကို SAP ဆုံးဖြတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ
အဖွဲ့အစည်းကိုဝယ်ယူအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးမပေး SAP ဝယ်ယူအင်ဖိုစံချိန်တင်ပေးသွင်း
FINS_ACDOC_CUST209 ကုမ္ပဏီကုဒ် template ကိုအဖြစ်အလံဖြစ်ပါတယ်
ME51N သုံးပြီး SAP အတွက်ဝယ်ယူလိုအပ်ချက်ဖန်တီးလုပ်နည်း
ကြားကာလအရာဝတ္ထု RF_BELEG ဘို့မတည်ရှိပါဘူး
စားပွဲတင် T169P: entry ကိုမတည်ရှိပါဘူး
စက်ရုံအတွက်တာဝန်မယူသည် SAP ယ်ယူခြင်းအဖွဲ့အစည်းကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကိုဘယ်လို
ကုမ္ပဏီကုဒ်နှင့်အပင်မှအဖွဲ့အစည်းက purchasing ၏ SAP တာဝန်
SAP MM S4HANA အတွက်ဝယ်ယူခြင်းအင်ဖိုမှတ်တမ်း
ME21N သည် SAP အတွက်ဝယ်ယူနိုင်ရန်ဖန်တီး
SAP SD ကအရောင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူး
ဘယ်လို SAP S က /4Hana အတွက်အရောင်းအမိန့်ကိုဖန်တီးရန်
SAP pm တွင်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု
SAP S က /4Hana training
အလေ့အကျင့်အဘို့သည် SAP ရှေ့တွင်အဆုံး installer ကိုနှင့် IDES သည် SAP access ကို - SAP S က /4Hana training
SAP pm တွင်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု : Plan ကို-Buy-Pay ကိုမ Ariba ဖြစ်စဉ်ကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်,
SAP စာတိုက်ဝယ်ယူအမိန့် : လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဝယ်ယူမှုများအတွက်ဝယ်ယူရေးဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုကဘာလဲ?
SAP GUI ကို Graphical User Interface : SAP အတွက် password ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
SAP FICO ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ထိန်းချုပ်မှု : SAP FI OB52 ငွေပေးငွေယူနေတဲ့ပို့စ်ကာလပိတ်ဖို့
SAP MM ပစ္စည်းမာစတာ : MM အင်တာဗျူးမေးခွန်းများကို SAP - နဲ့သူတို့ရဲ့အဖြေတွေကို
SAP SD ကအရောင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူး : ဘယ်လို SAP S က /4Hana အတွက်အရောင်းအမိန့်ကိုဖန်တီးရန်
SAP LSMW အမွေအနှစ် System ကိုရွှေ့ပြောင်းလုပျခှငျ : SAP ပို့ကုန် LSMW သုတ် input ကို session တစ်ခုရလဒ်များကို
SAP logon : စနစ်သစ် entry ကို SAP GUI ကို Create
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာ SAP ERP အကောင်အထည်ဖော်မှုအတိုင်ပင်ခံဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, သူတို့ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ SAP စီမံကိန်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်အမျိုးမျိုးသောယဉ်ကျေးမှုများ, အထူး, စီးနှင့်နည်းပညာများအကြားကူးလူးဖလှယ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့ကိုကူညီပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သည်ဒီဇိုင်းတိုးတက်အောင်, ပြွီး, တီထွင်ဆန်းသစ်နှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ client များကျေနပ်အောင်ရန်, အလုပ်မလုပ်အောင်အတွက်ရှင်သန်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဝေမျှဖို့ www.newsaperp.com ဖန်တီးခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့သည်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်စုံလင်ခြင်း, ငွေကြေး optimization နှင့် SAP ERP စီမံကိန်းကိုဖြန့်ကျက်ထက်ပိုမို 10 နှစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကမ္ဘာအဝှမ်းမှနိုင်ငံအများအပြား၌, ယင်းကဲ့သို့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, အလှကုန်, လူသုံးကုန်, အလှအပစောင့်ရှောက်မှု, ဒါမှမဟုတ်ဖက်ရှင်အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသွင်ပြောင်းဖြစ်နိုင်သမျှဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
SAP GUI ကိုလေ့ကျင့်သင်တန်း - SAP S က /4Hana training
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ SAP and Web ကို consulting
Copyright © 2019 နယူးသည် SAP ERP. All rights reserved.